स्पर्श मल्टिस्पेशालिटी अस्पतालद्वारा ४८ संक्रमितको सफल उपचार, १४ जनालाई बचाउन सकेन « News24 : Premium News Channel
स्पर्श मल्टिस्पेशालिटी अस्पतालद्वारा ४८ संक्रमितको सफल उपचार, १४ जनालाई बचाउन सकेन
वीरगन्ज । वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नं. १४ बहुअरीमा रहेको स्पर्श मल्टिस्पेशालिटी अस्पतालले कोरोना महामारीमा ६६ जना संक्रमितलाइ भर्ना गरेर उपचार गरेको जनाएको छ । अस्पतालमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै प्रबन्ध निर्देशक डा. महेश्वर कुर्मीले यही वैशाख २६ गतेदेखि कोरोना महामारीकै बीच अस्पताल संचालनमा आएको हुनाले महामारीसँगै जुद्धै ४८ जना कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न सफल भएको बताए ।
उनका अनुसार ६६ जना कोरोना संक्रमित भर्ना भएकोमा १४ जनालाई बचाउन नसकिएको पनि स्पतालले जनाएकाे छ । अहिले पनि ४ जना संक्रमित उपचाररत रहेको तर उनीहरुको पिसिआर रिपोर्ट नेगेटभि आईसकेको जनाइएकाे छ । ४८ जना भने पूर्ण रुपमा निको भएर डिस्चार्ज भइसकेको डा. कुर्मीले बताए ।
अस्पताल भर्खरै संचालनमा आएको हुनाले व्यवस्थापनमा केही कमी-कमजोरी भएको हुन सक्ने स्वीकार्दै अबको दिनमा व्यवस्थित तरिकाले अस्पतालको व्यवस्थापन गर्दै लैजाने प्रवन्ध निर्देशक कुर्मीले बताए । उनले नेपाल सरकारको मापदण्डभित्र रहेर २५ बेडको अस्पताल संचालन गरिएको र आगामी दिनमा पुनः नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी बेड थप्दै सेवालाई झनै प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने पनि उनले बताए ।
हाल अस्पतालमा ८ जना विशेषज्ञ चिक्सिकहरुको टिमले उपचार गरिरहेको उनकाे भनाइ छ । अस्पतालले मेडिशिन, गाइनो, पिडिआ, अर्थो, ग्यास्ट्रो, पल्मो, सर्जरी र न्यूरो सर्जरीको सुविधा दिँदै आएको छ । कोरोना महामारीकै बीच अस्पतालले बढि शुल्क लिने भन्ने विभिन्न आरोप प्रत्यारोप लागेको विषयलाई प्रष्टयाउँदै डा. कुर्मीले यस अस्पतालले नेपाल सरकारको मापदण्डभित्र रहेर कोरोना संक्रमितहरुसँग शुल्क लिएको प्रष्ट पारे । उनले नेपाल सरकारले आईसियूको शुल्क प्रतिदिन २२ हजारसम्म तोकेको भए तापनि अस्पतालले १५ हजार मात्रै लिएको र यहाँ दिइएको सेवाअनुसार मात्रै अधिकतम शुल्क लिएको बताए ।